कांग्रेसको जागरण अभियानबारे बहस–लथालिंग संरचना र अस्पष्ट कार्यनीतिले प्रभावकारी भएन - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कांग्रेसको जागरण अभियानबारे बहस–लथालिंग संरचना र अस्पष्ट कार्यनीतिले प्रभावकारी भएन - www.khabardabali.com
कांग्रेसको जागरण अभियानबारे बहस–लथालिंग संरचना र अस्पष्ट कार्यनीतिले प्रभावकारी भएन	अभियानमा सरिक नेता भन्छन्, गुटगट समस्याले पार्टी कमजोर भएको हो
जेठ १५ गते, २०७६ - १०:१२
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस वि.सं. २००७ देखि करिब सात दशक नेपाली राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा रहेको देखिन्छ । पछिल्ला केहि वर्षहरुलाई नियालेर हेर्दा कांग्रेस निकै कमजोर देखिएको छ । पछिल्लो चुनावसँगै कांग्रेस सरकारमा छैन् । सरकारमा नभएको कांग्रेस प्रतिपक्ष पनि बन्न सकेको छैन । चुनावी नतिजासँगै प्रतिपक्ष बनेको कांग्रेस दुईतिहाई सरकारको अगाडि नाम मात्रैको छ । संसदमा कांग्रेस कमजोर देखिन्छ । बेलाबेला तराई केन्द्रित दलहरुले बरु विभिन्न मागहरु राखेर संसदमा हंगामा पिट्छन् तर कांग्रेस सरकारको कुनैपनि कार्यक्रममा विमति जनाउन सक्ने अवस्थामा छैन् । यो कांग्रेसको ऐतिहासिक कमजोर अवस्था भएको ठहर्छ ।
कांग्रेसले पार्टीलाई पुरै परिवर्तन गर्ने र सरकारविरुद्ध जनतालाई जागरुक गर्ने भन्दै अहिले जागरण अभियान चलाईरहेको छ । गत वैशाख २५ देखि सुरु भएको जागरण अभियान तिन चरणमा गरी आगामी फागुनसम्म चल्नेछ । अहिले पहिलो चरणको अभियान सम्पन्न हुन जाँदैछ ।
पार्टी सुद्धिढिकरण, सुद्धिकरण र सरकारका गतिविधिको भण्डारफोर गर्ने लक्ष्य लिइएको अभियान कस्तो रह्यो त ? प्रश्न उब्जिएको छ । गुटगट अवस्था अनि लथालिंग पार्टी संरचनाका बीच सुरु अभियान बारे अनेकन प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । पार्टी राजनीति बारे गतिलो गरि प्रशिक्षण दिने र कार्यकर्तालाई उर्जाशिल बनाउने लक्ष्य लिइएको अभियान कस्तो देखियो ? के अभियानले कार्यकर्ता र नेतालाई सहि ढंगले पार्टी र राजनीति पढाउन सक्यो ? के नेताहरु आफ्नो गुटगत मत बट्याउन या महाधिवेशन सारिरहन त अभियानको नाम दिएका छैनन् ?
संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि कांग्रेसले नयाँ संरचनाअनुसारको पार्टी बनाउन सकेको छैन् । लथालिंग संरचनागत अवस्था र अस्पष्ट नीतिगत अवस्थाका बीच सुरु जागरण अभियान कस्तो रहँदै छ ? खबर डबलीले कांग्रेसले ऐतिहासिक रुपमा लिएको जागरण अभियान बारे बहस चलाएको छ । बहसको पहिलो श्रृंखला अन्तर्गत हामीले कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्यहरु देवेन्द्रराज कँडेल, कमला पन्त र प्रदिप पौडेललाई जागरण अभियानको पहिलो चरण कस्तो रह्यो भनि प्रश्न गरेका छौं । खबर डबलीले केन्द्रिय सदस्य कँडेल, पन्त र पौडेलसँग लिएको प्रतिक्रिया यस्तो छ ।
जेठ १५ गते, २०७६ - १०:१२ मा प्रकाशित